सुन्दर आँखा पछाडि लुकेको दर्दनाक सत्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सुन्दर आँखा पछाडि लुकेको दर्दनाक सत्य
एजेन्सी। अमेरिकामा बस्दै आएकी एक दुई वर्षीया बालिकाका आँखा निकै राम्रा छन्। उनको आँखाको तारिक जो कोहीले पनि गर्दै आएका छन्। तर उनका सुन्दर आँखा पछाडिको कारण भने दर्दनाक छ। वास्तवमा उनी एक दुर्लभ विमारीसँग जुधिरहेकी छन्।
जसका कारण उनका आँखा गुडायाका जस्तै ठूला छन्। उनको आँखा नै गुडियाका जस्तै देखिन्छन्। उनी जन्मिएको एक हप्तापछि उनलाई दुर्लभ रोग लागेको थाहा भएको थियो। यो विमारी दुई लाख बच्चामध्ये एक जनालाई हुन्छ। यो रोगका कारण आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा हुन्छ।
यो घटना अमेरिकाको मिन्नेसोटमा बस्ने मेरोन र करीना मार्टिनेजकी करिव दुई वर्षीया छोरी मेहलानीको हो, जो एक दुर्लभ रोकसँग जुधिरहेकी छन्। जसका कारण उनका आँखा सामान्य भन्दा ठूला छन्।
बालिकाकी आमाका अनुसार मेहलानी जन्मिदाँ उनको उमेर १८ वर्षको थियो। र उनलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन। करिव दश घण्टाको लेबर पेनपछि उनले सामान्य रुपमा बच्चीलाई जन्म दिइन्। बच्चीको आँखा केही ठूला थिए। र सबैले उनको आँखाको तारिफ गरिरहेका थिए। जसका कारण बच्चीका आमा बुवा निकै खुशी थिए।
हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गर्नुपूर्व बच्चीको पूरै जाँच गरियो। त्यसपछि डाक्टरले उनीहरुलाई बच्चीमा रहेको रोगका विषयमा बताए। डाक्टरले बच्चीमा एक दुर्लभ रोग रहेको बताएका थिए।
यो रोग लाग्नुको कारण डाक्टरले गर्भमा बच्चीको आँखाको नानीको विकास पूर्ण रुप विकास नभएको बताए। डाक्टरका अनुसार यो बिमारीका कारण बच्चीलाई अन्य समस्या पनि देखिन थाल्यो।
बच्चीलाई जुन रोग लागेको थियो, जसका कारण उनको आँखा ठूला भएका थिए, त्यो रोग निकै संवेदनशील थियो। जसका कारण उनी घाममा सन ग्लासेस नलगाइ निस्किन हुँदैनथ्यो।
आँखाभित्रको ज्योति आँखाको नानीमार्फत पुग्छ। त्यसकारण सामान्य भन्दा ठूलो आँखाको नानी भएका कारण घामबाट धेरै समस्या हुन्छ। त्यसकारण उनी घरबाट बाहिर निस्किँदा सन ग्लोसेस अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्छ। बच्चीकी आमाले आफूहरुले कहिल्यै पनि यस्तो बिमारीको विषयमा जानकारी नपाएको बताइन्।